Ihe nrụpụta ihe kacha mma nrụpụta igwe na ụlọ nrụpụta | Keyuan
Igwe ahụ bụ igwe ọhụrụ nyochara wee rụpụta nke ọma site na ụlọ ọrụ anyị dị ka ọnọdụ China siri dị na -amịkọrọ ma na -agbari teknụzụ dị elu nke ụwa.thas nwere atụmatụ dị ka nhazi ezi uche, arụmọrụ kwụsiri ike.
A na -ejikarị igwe eji eme ihe na -ebugharị ma na -ebugharị akụrụngwa siri ike na ụlọ ọrụ ọgwụ.Ọ nwere ike na -arụ ọrụ na haixer, pịa mbadamba, ihe mkpuchi capsule, wdg.
Igwe na -ebuli igwe YTG Series bụ akụrụngwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ a mepụtara iji gboo mkpa nke ịwelite ihe na usoro ọgwụ ọgbara ọhụrụ. Enwere ike iji ya dị ka ihe na -ebuli elu ma na -akwụ ụgwọ maka igwe mkpakọ mbadamba dị iche iche, igwe na -ejuputa capsule, igwe agwakọta na igwe na -agụta mbadamba, enwere ụdị igwe dị iche iche na JT Series maka ndị ọrụ ịhọrọ na iji, dị ka ụdị mbuli elu, mkpanaka ụdị mbuli elu, na ụdị ntụgharị ntụgharị mkpanaka.
Tụnye hopper n'ime ogwe aka na -ebuli elu nke ga -ebuli ma ọ bụ wedata n'okpuru njikwa eletriki na nke hydraulic, si otú a na -ebuli, nyefee na ụgwọ ihe.
Ihe mejupụtara igwe a bụ chassis, kọlụm, Iifting system.etc. Mgbe ọ na -arụ ọrụ, kpoo hopper na -eburu ihe n'ime ihe na -ebuli elu nke onye na -ebuli elu. Bugharịa chassis ahụ iji chọpụta njikọ mechiri emechi na akụrụngwa ịchaji.
Igwe ahụ bụ igwe ọhụrụ nyochara wee rụpụta nke ọma site na ụlọ ọrụ anyị dị ka ọnọdụ China siri dị na -amịkọrọ ma na -agbari teknụzụ dị elu nke ụwa.nke nwere atụmatụ dị ka nhazi ezi uche, arụmọrụ kwụsiri ike. dị ọcha, na -achịkwa mmetọ uzuzu na mmetọ n'ofe, na -eme ka usoro mmepụta dị mma, na -emezu ihe GMP chọrọ maka mmepụta ọgwụ.
Equipment Akụrụngwa dị elu nke na-ejikọ igwe, elektrọnik na hydraulics n'ime otu ahụ, nwere obere kọmpat ma na-agba ọsọ na ntụkwasị obi.
● A na -eme ahụ gbọmgbọm nke igwe anaghị agba nchara nke na -egbu maramara nke ukwuu n'ime na n'èzí, na -enweghị akụkụ nwụrụ anwụ ma na -eme ihe GMP chọrọ.
Frame Ogidi kọlụm ụdị mbuli elu nwere ike tụgharịa n'otu akụkụ; enwere ike ịkwaga ụdị mkpagharị mkpanaka na ebe ọrụ, mmegharị ahụ dabara adaba ma na -agbanwe agbanwe; Enwere ike chepụta ma rụpụta ụdị ntụgharị mkpanaka mkpanaka ka ọ nwee ogwe aka na -ebuli elu nke dabara na gbọmgbọm ihe mbụ nke onye ọrụ, ka ogwe aka na -akwụ ụgwọ wee nwee ike ịrapagidesi ike, bulie gbọmgbọm ahụ ma nwee ike mee ntụgharị 180 Celsius.
● Enwere ike iji gbọmgbọm ihe dị ka mbadamba ihe na ịchekwa ihe na usoro mgbago elu yana dị ka ihe nkwụnye ọkụ na usoro mgbada (mpịkọ, jupụta na ịgụta ọnụ).
● A na -ebufe ọgwụ ahụ na ọnọdụ emechiri emechi, si otu a na -ezere mmetọ n'oge njem.
● valvụ na -agbapụta agbapụta nwere kọmpat, dị mfe ịtọpụ ma dị mfe nhicha.
● Ọ gbanweela usoro ọdịnala nke ọrụ ntuziaka, belatara ike ọrụ, yana imechi mmechi emeela izere ife efe n'elu uzuzu na mmetọ obe n'oge njem. Ọ dabara nke ọma na GMP chọrọ.
● Mgbe a na -akwụ ụgwọ, enweghị ihe ọ bụla nke ịkwa akwa.
Nke gara aga: ZL granulator
Osote: Moveable ndoli -eweli igwe